Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: June 2011
News Update: Between Kachin Army and Burma Army War. ကချင်နဲ.ဗမာတပ်စစ်ပွဲတွင်နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ.မှ ၂၂ ရက်နေ.အထိ၊ဂျိမ်ဖော်သတင်းမှပြန်လည်တင်ဆက်ထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဖျားပိုင်း ဆွမ်ပရာဘွမ် ခရိုင်ဘက် ယနေ့ ဇွန် (၂၂) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၃) နာရီလောက်တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၇) နှင့် နအဖစစ်တပ်ရင်း ခလရ (၁၃၉) တို့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စစ်ကြောင်းထိုးခြင်းကို ၂ ရက်လောက် ရက်တန့်ထားတဲ့ နအဖစစ်တပ်ဟာ ဒီနေ့ ပြန်ပြီး လိုင်ဇာ ဘက်ကို စစ်ကြောင်း တွေထပ်တိုးနေကြောင်း ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှ သတင်းရရှိပါသည်။
မစ်ကြီးနား မိုးကောင်းကြားရှိ နန့်ကွေ့ကျေးရွာ နန့်ကွေ့ချောင်းပေါ်ဆောက်လုပ်ထားသော ပေ (၁၀၀) ကျော် အရှည် ရထားလမ်း တံတား ကို (ဇွန် ၂၂) ရက် မနက်စောစောအချိန်တွင် ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယနေ့ ချီဖွေမြို့တွင် ကေအိုင်အို မျိုးချစ်စစ်တပ်နှင့် နအဖ စစ်တပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွါး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့တွင် တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ အသေအပျောက်စာရင်းများဆက်လက်စုံစမ်းလျက်။
ဇွန် (၂၁) ရက်နေ့ည မိုးမောက်မြို့နယ် ဂျခန့်ဒပ် (၁၅) မိုင်ရှိတံတားကို ကေအိုင်အိုမျိုးချစ်တပ်မတော်များက မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အေးရှားဝေါလ်ပိုင် ကားကြီး (၃) စီးအပြည့် နအဖစစ်သားများ မြစ်ကြီးနားမှ တန်ဖဲကျေးရွားသို့ တက်သွားကြောင်းနှင့် တန်ဖဲကျေးရွားရှိ လူနေထိုင်မှုမရှိသော အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင် စခန့်ချနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ စစ်တပ်က ဖြတ်သွားဖြတ်လား ရွာသားများကို အတင်းအဓမ္မခေါ် ယူကာ ခြုံနွယ်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခိုင်းကြောင်းနှင့် အဖိုးအိုတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများလုပ် ပြီး ထိုင်ထ လုပ်ခိုင်းကြောင်း ဒေသခံများက သတင်းပေးပို့လာပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မိနှစ်ပိုင်း အတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် ဗုံး (၂) လုံးပေါက်ကွဲကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ထိခိုက်မှု ရှိမရှိကိုဆက်လက်စုံစမ်းလျက်။
Justafew minutes ago, bombs were exploded two times at the No.1 police station of Myitkyina. Number of causualties is not yet known.
News Update between the War of KIA and Burman Troop. ကချင်တပ်နဲ.ဗမာတပ်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးသတင်းများ
June 19, 2011. ဂျိမ်ဖော်သတင်းဌာနမှပြန်လည်တင်ပြထားသည်။
Landmine exploded in KIA Battalion5area caused twelves died, 10 wounded on Burmese soldiers' side
ယနေ့ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၅) နယ်မြေတွင် ကေအိုင်အေ ထောင်ထားသော မိုင်းများကြောင့် နအဖ စစ်သား (၁၂) ဦး ပွဲခြင်းပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းနှင့် (၁၀) ယောက်ကျော် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိ။ ကေအိုင်အေဘက်မှ တပ်သား တစ်ဦး အနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိ။
Kachin Refugees Left Remote Villages of Myitkyina Town
မစ်ကြီးနားမြို့တွင်း လယ်ကုန်း ဇီးလွန် ကျွန်းပင်သာ ရပ်ကွက်များ၌ ဂါးရာယန်၊ ဒဘတ်၊ ကစူး ကျေးရွားများမှ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များစွာ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိ။
Burmese Troop Accidentally Opened Fire Each Other, Three Died, 10 wounded.ဗမာတပ်အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၃ ယောက်သေဆုံး၊ ၁၀ ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရ၊
မနေ့ည ၁၁ နာရီလောက်ျတွင် တနိုင်း ဘက်ရှိ ယုဇနကုမ္မဏီ တွင်ရောက်ရှိနေသော ခလရ (၂၉၆) ကို ကူညီရန်ရောက်ရှိလာသော ခလရ (၃၈၄) (၃၈၅) (၃၉၆) တို့ချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ (၃) ဦးသေဆုံးပြီး (၁၀)ယောက်ကျော် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိ။
There wasafight among Burmese soldiers serving as security guard for YUZANA Company in Danai area around 11 pm yesterday. Two died in the fighting and many were injured.
KIA Destroyed SA YA PA (Military Security Office) in Nam Sam Yam Village, Maw Mawk Township by Explosive, Killed One Burmese Soldier.
ယမနေ့ည နမ်ဆန်ယန် ကျေးရွာရှိ စရဖ ရုံးကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်တပ်မတော်က ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် နအဖ စစ်သား တစ်ဦး ကျဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိ။
Daw Aung Sann Suu Kyi Birthday Celebrated in Laiza KIO HQ
Daw Aung San Suu Kyi 66th Birthday in Laiza
At9am local time, this morning, in Laiza, headquater of KIA, KIO leaders along with religious leaders celebrated birthday of Aung San Suu Kyi (born 19 June 1945), Noble Peace Laureate of 1991. International news media group were also invited.
13 Burmese soldiers found dead
Dead body of thirtyteen (13) Burmese soldiers were found in the battle of KIA batallion4area last night. Several land mines were also exploded, it's not known yet how many were injured and dead in the explosion.
ကေအိုင်အိုနယ်မြေရှိတပ်ရင်း ၄ တွင်မနေ.ညကမြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဗမာစစ်သား ၁၃ သေဆုံး၊အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
KIA Sniper Team Killed three Burmese soldiers. ဗမာစစ်သားသုံးယောက်ကိုကချင်းလက်ဖြောင့်စနိုက်ပါးတပ်ဖွဲ.ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့
ဂျိဖ်ဖော်သတင်းဌာန။ June 18 evening, 2011.
ယနေ့ညနေပိုင်း ကေအိုင်အို တပ်ရင်း (၅) နှင့် နအဖစစ်တပ် တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ကေအိုင်အို တပ်ရင်း (၅) မှ စနိုက်ပါ တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့် နအဖစစ်သား (၃) ယောက်ကျ၊ စစ်ကူပေးရန် ချီတက်လာသော ခလရ (၂၃၆) တပ်ရင်းကို ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့မှ ဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Around4pm today, three Burmese soldiers were shot death by KIA sniper battalion 4. Burmese reinforcement soldiers from Hka La Ya 236 were also defeated.
Kachinn Refugees fled from recent fight of KIA and Burman troop List. ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စာရင်း
Kacin Women in remote villages being Helpless, Tortured and Raped. ရွာတွင်ရှိကချင်အမျိုးသမီးများအကူအညီမဲ့ဗမာစစ်တပ်၏၊နှိပ်စက်မုဒိန်းကျင့်ခံနေရ
Kacin Women in remote villages being Helpless, Tortured and Raped
Dai ni Myen hpyen ni gaw Dung Bung mare kaw hpyen hprawng n lu hpawng ai majaw ngam taw ai nta htinggaw3roi rip zingri sat kau lai wa ma ai. Ma kaji ni hpe shawg gap sat kau nhtawm, Num (kaba,kaji) ni hpe roi rip n na sat kau lai wa ma ai. La ni hpe gaw porter woi mat wa ai lam chye lu ai.
Burmese military killed small children then raped girls and women then took the men for porterring from three households from DumBung village those who can't run away.
စစ်ဘေးကို လွတ်ရာသို့ မရှောင်သိမ်းနိုင်းသော ဒွန်ဘုံးကျေးရွာရှိ မိသားစု (၃) စု ကို နအဖ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း သတင်းရရှိ။ ကလေးသူငယ်များကို အရင်ပစ်သတ်လိုက်ပြီး မိန်းမသားများကို မဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယောင်္ကျားများကို ပေါ်တာ ထမ်းရမ်းခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Sinbo hta Ma4lu ai hpaw mi 1 hte asak 18-20 lapra na num sha3hpe Myen hpyenla ni roi rip. Hpawmi wa gaw si mat, num sha3gaw asak naw hkrung nga ai lam chye lu ai.
မနေ့က (၁၇၊၆၊၁၁) တွင် ဆင်ဘိုရွာ၌ ကလေးလေးယောက်မိခင် တစ်ဦး နှင့် အသက် (၁၈-၂၀) အရွယ် မိန်းခလေး (၃) ယောက် အား နအဖ စစ်တပ်က မဒိန်းကျင့် ညင်းဆဲ နှိပ်စက်ခဲ့သောကြောင့် ကလေးမိခင် က သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Yesterday, on June 16, 2011, in Sinbo Village, mother of four children and three girls aged between 18-20 were tortured and raped by Burmese soldiers. The mother of four children was victimized and died.
Kachin War's Photo documents. ကချင်နဲ.ဗမာစစ်ပွဲဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
End of Kachin Independence Army Cease-fire - Images by ryan libre
Undemocratic Burmese Regime's News Release on KIA Attacks: Accusing KIO with its False Statement
သတင်း သတင်း။ News, အမြင်များ, ဿ
တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အခု တိုင်းရင်းသားတွေက စစ်ရေးအရ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိလာတော့ ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားသင့်တယ်လို့ ထင်သလဲ။
“ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ဗမာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး တောင်းရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ဟာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိဖို့လိုလာကြပြီ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းတယ် ဆိုရုံနဲ့ပေါ့ဗျာ။ အင်ဒိုနီးရှားတို့၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာလည်း အဲဒီလို ကူးပြောင်းတယ်ဆိုရုံနဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က အဲဒီတိုင်းပြည်တွေနဲ့ မတူတဲ့အတွက် အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရုံနဲ့ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူး”
“ကျနော်တို့က အာဏာရှင်စနစ်က ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့နေရာမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က
ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ပုံသဏ္ဍာန်၊ တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဟာ တန်းတူအခွင့်အရေးရတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်မှ ကျနော်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ရောက်မယ်။ ဒီမိုကရေစီတခုထဲနဲ့က မရဘူး။ အဲဒီအချက်ကို ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာခံယူပြီးတော့ အထောက်အကူဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာ။ လက်ရှိ သိန်းစိန်အစိုးရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီ တချက်ထဲ တောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ ပြည်ထောင်စု ပုံသဏ္ဍာန်စစ်စစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်အောင် ဝိုင်းဝန်းတွန်းအားပေးကြရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် အကြံပြုချင်တယ်”
ကေအိုင်အိုနဲ.ဗမာစစ်တပ် ၅ ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွင်းဗမာတပ်ရင်းများပြုတ်၊သေကြေထိခိုက်မှုများပြား၊လမ်းပန်ဆက်သွယ်များပြတ်တောက်၊
ဆန်ဂန်တိုက်ပွဲတွင်ဗမာတပ်ရင်းနှစ်ရင်ဖြစ်သော ခမရ၃၄၈ နှင့်၄၃၇ပြုတ်ကျပြီးထိခိုက်သေးဆုံးများစွာရှိခဲ့သည်၊ကချင်ပြည်နယ်ရှိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအနည်းဆုံးတံတား ၅ စင်နှင့်သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်အနည်းဆုံးတံတား ၂ စင်ဖျက်စီးလိုက်ကြောင်းကချင်းသတင်းဌာနကရေးသားသည်၊တိုက်ပွဲတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဖွားအမျိုးအနွယ်တိုင်းရင်းသားများကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းထားပြီးရှေ.တန်းတင်တိုက်နေတာကိုလည်းသတင်းထွက်နေပါသည်၊အခုတိုက်ပွဲတွင်းကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာသာမကဘဲသျှမ်းပြည်နယ်ရှိကေအိုင်အိုတပ်နဲ.ဗမာတပ်ကလည်းတိုက်ပွဲတစ်ညလုံးဖြစ်ပွားနေတုန်းဘဲ၊အကယ်၍ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကနေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကိုမရပ်စဲဘူးဆိုရင်တစ်ပြည်လုံးပြည်တွင်းဖြစ်ပွားကြောင်းကြေညာခံရဖွယ်ရှိသည်၊
မြေခွေးအစိုးရအတုတက်လာပြီးနောက်ယခုလိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်သမိုင်းတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်နေသည်၊ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်၊ ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေကြောင့်နှင့် အခု ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြောင့်လည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေပြန်ပြီ၊အခြေခံဥပဒေရေဆွဲဖြစ်သည့်အကြိမ်တိုင်အကြိမ်တိုင်မှာကလိမ်ကကျစ်အစိုးရအတုတွေတက်လာပြီးပြည်တွင်းစစ်အမြဲလိုလိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊
သတင်း သတင်း။ News,ါ
သတင်း အမြင်များ,ဲ.
ကေအိုင်အိုနဲ.ဗမာစစ်တပ်တိုက်ပွဲတွင်းဗမာတပ်ဘက်က အယောက် ၃၀ နှင့်ကချင်းတပ်ဘက်က ၄ ဦးအသီးသီးသေကြေဒဏ်ရာရ
Saturday, 11 June 2011 22:09 KNG
ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၁၊ ည ၁၁ နာရီ - မန်မော်(ဗန်းမော်ခရိုင်)၊ အင်မောက်(မိုးမောက်)မြို့နယ်၊ ဆန်ဂန် KIA တပ်ရင်း ၁၅ နယ်မြေတွင် KIAနှင့် မြန်မာစစ်တပ်များ ယနေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲကတည်းက ယခုချိန်ထိ (တစ်ညလုံး) ဆက်တိုက် စစ်ဖြစ်ပွားနေသည်။
ဆန်ဂန် KIA Bum Sen အမာခံစခန်းသို့ ချီတက်လာသော မြန်မာစစ်တပ် အင်အား ၅၀၀ ကျော်နှင့် KIA တပ်များ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စစ်ပွဲဖြစ်နေသည်ဟု ရှေ့တန်းမှ KIA အရာရှိများပြောသည်။
Tuesday, 07 June 2011 16:36 S.H.A.N.
Once again, the Burma Army, unable to beat the rebels above the belt, has played its ace in the hole: chemical weapons (CWs)
But, like the late Gen Tin Oo, let’s hope the present military leaders will be quite as frank and open about their use of the weapons.